Njikwa faili; ihe ọ bụ, ọrụ na ndị ọzọ - VidaBytes | LifeBytes
Onye ọ bụla nke Sistemu arụ ọrụ nke dị taa, na-arụ ọrụ site na sistemụ faịlụ eburu ụzọ akọwa nke eji jikwaa ọdịnaya dị iche iche nke nchekwa ahụ. Otu n'ime nnukwu uru na gam akporo nwere bụ na ọ nwere nnukwu mgbanwe mgbe ọ na-abịa na-eme nchọgharị na nchekwa nchekwa. Naanị ị ga-ejikọ ngwaọrụ mkpanaka gị na eriri USB yana nke a na PC. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike hazie ma nyefee faịlụ ndị ị chọrọ.
Na post ị nọ ugbu a, anyị ga-eleba anya na isiokwu nke ihe njikwa faịlụ na nke kacha mma. Anyị na-aga na-elekwasị anya tumadi na ihe niile nwere na-eme gam akporo ngwaọrụ. N'ọtụtụ n'ime ngwaọrụ mkpanaka anyị ma ọ bụ mbadamba, a na-etinyekarị onye njikwa faịlụ dị ka ọkọlọtọ, ihe na-adịghị mma nke a bụ na ọtụtụ n'ime ha na-abụkarị isi na nke ka mma.
Iji nweta arụmọrụ kachasị mma site na sistemụ njikwa faịlụ ndị a, ndị ọrụ nwere ha ga-adị ekwe ka ịchekwaa, dezie, ihichapụ ma ọ bụ detuo faịlụ niile achọrọ, yana inwe ike ịnweta ha n'enweghị nsogbu ọ bụla.
1 Kedu ihe bụ njikwa faịlụ?
2 Kedu ihe onye njikwa faịlụ agbakwunyere nwere ike ime?
3 Ọdịmma nke njikwa faịlụ ọkọlọtọ
4 Ndị njikwa faịlụ kacha mma
4.1 Onye njikwa faili Astro
4.2 Faịlụ Google
4.3 Ngwa njikwa faili
4.4 Onye nchoputa siri ike
4.5 Ọchịchị dum
Kedu ihe bụ njikwa faịlụ?
Ndị njikwa faịlụ maka ma gam akporo na ụdị ngwaọrụ mkpanaka ndị ọzọ nwere otu ihe ahụ arụ ọrụ, hazie faịlụ dị iche iche ma nyekwa gị ohere ijikwa faịlụ ahụ n'ụzọ dị mfe nke anyị nwere na nchekwa anyị.
Na kọmpụta, ụdị onye nchịkwa a etinyelarị, mana nke a anaghị eme na ụfọdụ ngwaọrụ mkpanaka, mbadamba, wdg. Onye njikwa faili anaghị abịa na ndabara mgbe niile.
Ọ bụrụ na ọ dabara, na ngwaọrụ gị na-abịa a Sistemụ faịlụ ewepụtara, ị ga-enwe ike ịgbanwe ya ngwa ngwa na ọ bụ site na nbudata na emesịa wụnye ngwa maka nzube a.
Kedu ihe onye njikwa faịlụ agbakwunyere nwere ike ime?
Inwe onye njikwa faili zoro ezo na ngwaọrụ gam akporo gị n'ime ngwa ntọala na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ igbochi ndị ọrụ a ịbanye na kọntaktị na sistemụ faịlụ. Otu n'ime isi ihe kpatara nke a bụ nchekwa, ebe ọ bụ mgbanwe n'usoro faịlụ echekwara nwere ike ime ka ụfọdụ ọrụ kwụsị ịrụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ya site na ngwaọrụ gị, ị ga-abanye na nhọrọ ntọala, chọọ ma họrọ "Memory na USB", wee nweta "Ebe nchekwa dị n'ime" wee pịa "Explore". Mgbe ị nwere mepee Explorer, ị ga-enwe ike ịhụ folda niile echekwara n'ime ebe nchekwa nke ngwaọrụ gị.
Ị ga-enwe ike ịgbanwe echiche nke grid, nhazi aha, ụbọchị ma ọ bụ nha na ị nwere ike ịme ọchụchọ mgbe ịmalite ọrụ na njikwa. Iji nweta ọdịnaya nke nchekwa, ị ga-pịa nke ọ bụla n'ime ha.
Dịka anyị kwuru na ngalaba gara aga, ekele maka ọrụ ndezi dị iche iche nke onye njikwa faili nwere, ị ga-enwe ike ịhọrọ faịlụ, ihichapụ ha, detuo ya na ebe ọ bụla ma ọ bụ kesaa ha na ngwa ndị ọzọ.
Ọdịmma nke njikwa faịlụ ọkọlọtọ
Na ndepụta na-esonụ, ị ga-ahụ usoro nke isi ihe na-adịghị mma nke ọtụtụ ndị njikwa faịlụ na-ekekọrịta na na ọ ga-adị mkpa iji melite ha maka nhazi ka mma na nhazi nke onye ọrụ.
Ndị njikwa faili ọkọlọtọ enweghị ọrụ ịkpụ, ka ị nwee ike ibugharị faịlụ site na otu nchekwa gaa na nke ọzọ, naanị ọrụ enwere ike bụ iṅomi. Mgbe ị na-arụ ọrụ nnomi, ihe anyị na-eme bụ ịmegharị faịlụ ụfọdụ site n'inwe ya ugboro abụọ, otu ugboro na folda mbụ, nke anyị ga-ehichapụ, na nke ọzọ na nchekwa ahọpụtara.
Ebe nke abụọ adịghị ike anyị na-ahụ bụ nke ahụ ị nweghị ike ịnyegharị folda ma ọ bụ faịlụ aha, a na-egosipụta aha ndị zuru oke na nke mbụ, ma ha anaghị ekwe ka gbanwee ha maka ọdịiche ka mma.
N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ nweghị nchekwa ọhụrụ enwere ike ịmepụta maka nhazi ka mma nke faịlụ echekwara, ị nwere ike iji naanị nchekwa ndị emeberela.
N'ikpeazụ, rịba ama na ọ bụrụ na ọ nwere usoro iji chekwaa faịlụ ndị a na-ebugo na ígwé ojii, ma ọ bụ na Dropbox, Drive ma ọ bụ ndị ọzọ, njikwa faịlụ ndị a na nke ebe nchekwa nke ngwaọrụ ahụ ga-abụ nnukwu ọganihu.
Ndị njikwa faịlụ kacha mma
Iji nwee ike ịhazi usoro faịlụ anyị, anyị na-akwado ịnweta ihe ọzọ na njikwa ọkọlọtọ, nke, dịka anyị hụworo na ngalaba nke gara aga, nwere ike iwepụta usoro nkwụsịtụ. Na ngalaba a, anyị na-ewetara a nhọrọ nkenke nke ụfọdụ ndị njikwa faịlụ akwadoro.
Onye njikwa faili Astro
Otu n'ime ngwa kachasị ewu ewu n'etiti ndị ọrụ, onye inwe ike ịhazi faịlụ niile site na ebe nchekwa dị n'ime yana kaadị SD na igwe ojii. Ọ bụ kpam kpam n'efu, yana dịkwa mfe iji yana ọtụtụ ọrụ dị iche iche.
Njikwa faili Google, nwere interface dị mfe nke ukwuu. Ọ ga-ekwe gị, jikwaa ọdịnaya nke echekwara na ngwaọrụ gị, mana ị gaghị ama kpọmkwem ebe faịlụ ndị ahụ dị. Ị nwekwara ike ịtọhapụ oghere site na ihichapụ faịlụ na ngwa, jikwaa faịlụ ma kesaa ha na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Ngwa njikwa faili
Dị ka aha ya na-egosi, ngwa a Ọ nwere ọrụ niile dịnụ iji jikwaa ya n'ụzọ kacha mma. Ngwá ọrụ efu ma dịkwa ike nke ị nwere ike ijikwa faịlụ gị ebugoro na igwe ojii.
Onye nchoputa siri ike
Ezi kpochapụwo na ekwentị mkpanaaka gam akporo, nke na-emeziwanye ọrụ na imewe ya ka oge na-aga. Daalụ maka ọrụ ndị a anyị kwuru maka ya, ị nwere ohere ịmepụta nchekwa ma ọ bụ faịlụ ọhụrụ. Na mgbakwunye na ihe a niile na inwe ike ijikwa ha, ị nwere ike ịnweta faịlụ echekwara na igwe ojii.
Ọbụghị naanị na anyị na-ahụ ụdị desktọpụ ya, mana ọ nwekwara ngwa maka ndị ọrụ gam akporo. Na isiokwu nke ngwaọrụ iji jikwaa faịlụ, ọ bụ otu n'ime nhọrọ kacha mma. Ọ nwere njikwa faịlụ na windo abụọ, nhọrọ ọtụtụ, nyegharịa nhọrọ, ibe edokọbara na ọtụtụ ndị ọzọ.
Site na ngwaọrụ njikwa ndị a, ọ bụghị naanị na ị ga-emezi nhazi nke faịlụ gị, mana ị ga-enwekwa ikike karịa ebe nke ọ bụla n'ime ha dị ka i wee mata ha ngwa ngwa n'oge ọzọ.
Anyị na-agwa gị mgbe niile ihe ndị a na taa ọ gaghị adị ntakịrị, na ọ bụrụ na ị chere na ị maara otu onye njikwa faịlụ nke ị gbalịrị ma nye gị nsonaazụ dị mma, egbula oge ịhapụ ya na mpaghara nkwupụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndụ LifeBytes » Aplicaciones » Njikwa faili; kedu ihe ọ bụ, ọrụ na ihe ndị ọzọ